Technorati Rank WordPress Plugin Shanduro 2.0.4 Yakabudiswa | Martech Zone
Technorati Chinzvimbo WordPress Plugin Shanduro 2.0.4 Yakaburitswa
Svondo, Kubvumbi 22, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini (pakupedzisira) ndakagadzirisa nyaya ne Technorati Chinzvimbo WordPress Plugin iyo inogadzirisa nyaya nekutadza kunyora kana kuvhura cache faira. Ini ndawedzera cache subdirectory kune iyo plugin uye ikozvino chengeta iyo cached faira mune iro dhairekitori.
Iyo plugin ichiri kuda PHP5 + (NyoreXML) uye cURL raibhurari. Kana muenzi wako asina ichangoburwa uye yakakurisa, ini ndinokukurudzira kuti ukwidziridze kune wemuenzi mutsva. Iwe unowana coupon ye gore remahara yekutambira nemuenzi wangu mune yangu RSS feed.
Pamusoro pezvo, ini ndiri kushanda mukusimudzira iyi plugin neimwe yekuwedzera giraidhi (nekuda kwa Technorati kune rumwe rubatsiro ipapo!). Munguva yangu yese yekusarudzika - hongu!
Ini ndangowedzera yako blog kune angu mafavs.
Zita rangu rekushandisa technorati igavino.
Iwe unogona kuwedzera yangu blog kune ako mafav nekudzvanya iyi link.
unogona kufunga kuti ndiri benzi asi ini ndisiri munhu weIT.
Ini ndaisa iyo Technorati Rank plugin asi ini ndinoramba ndichiwana iri meseji.
Ungakwanisa kundiudza kwandiri kuenda ndiri kutadza?
Kwete kupusa zvachose chinam! Iyo plugin inoshanda nekunyora kopi yemhedzisiro kudhairekitori kuitira kuti irege kusangana neTechnorati nguva imwe neimwe. Izvi zvinodaidzwa kuti 'caching'. Mune ino kesi, zvinoita sekunge iyo plugin haina mvumo yakakodzera yekunyorera kune plugin / cache dhairekitori. Kana iwe uchigona kuseta mvumo pane iro dhairekitori, ivo vanofanirwa kuchinjiswa kuti vave nemvumo izere (CHMOD 777).
Kutenda neWP yako plugin, Douglas. Ini ndawana diki diki mune iyo admin interface iwe yaunofanirwa kugadzirisa: iyo cache sarudza bhokisi harisi kushanda nemazvo. Izvi zvinokonzerwa netambo yako:
kana (($ wptr_hours == "4") || ($ wptr_hours = ""))
kuseta iyo sarudzo kuitira kuti dai usati wagadzwa. Ndine chokwadi chekuti iwe unogona kuona iwe uchida 'enzaniso' pane yechipiri kesi, kwete 'kupihwa' - iyo inoburitsa kunze kukosha kwe $ wptr_hours, saka haisarudze chero sarudzo uye unopedzisira uine '1 'nekutadza. Ndinovimba izvi zvinobatsira!
Kutenda nekuwana Dan! Ini ndaita shanduko uye ndakaisa v 2.0.5:
kana (($ wptr_hours ==? 4?) || ($ wptr_hours === null))
Jul 7, 2007 pa 10: 00 AM
Kutenda neiyi plugin Douglas.
Ndiri kuona yako blog ine chinzvimbo chakanaka muTechnorati. Ramba wakadaro!
Jul 7, 2007 pa 10: 35 AM